Xaafadda (Finsbury Park) Oo Ay U Badanyihiin Reer Tanadland Iyo Carab Shaamiyiin Ah Oo Gaari Lagu Weeraray – Codka Qaranka Tanadland
Xaafadda (Finsbury Park) Oo Ay U Badanyihiin Reer Tanadland Iyo Carab Shaamiyiin Ah Oo Gaari Lagu Weeraray
Sawirka Gudoomiyaha ANOCA (Mr. General Plenfo) oo gudoonsiinaya aqoonsiga xubinnimada joogtada ah (Duraan Axmed Faarax).
Magaalada London oo lagu tiriyo magaalo ay deganyihiin soomaalida ugu badan ee ku nool magaalooyinka reer galbeedka oo dhan. Marka ugu horaysa ee uu tago qof ka tegey Canada iyo Maraykanka waxa ugu layaabka badan ee uu ku arkidoonaa waxa weeye, sida soomaalidu ay ugu badantahay oo ay hadana ugu dayacantahay magaalada London. Magaalada London waxaa ku adkaatay soomaalida inay wax horumar ah oo la taabankaro ay ka sameeyaan dhan kasta oo ay tahay. Taas waxaa weheliya arin layaab leh oo u gaar ah magaalada London Soomaalida Ku nool, taas oo ah inay kala deganyihiin oo aysan isla deganeyn. Soomaalida London degan qolo waliba waxay degantahay aag u gaar ah oo lagu yaqaan. Waqooyiga London na qawmiyadaha Soomaalida xaafadda ay ka degaan waa xaafadda
(Finsbury Park) iyo hareeraheeda.
Xaafadda (Finsbury Park) oo ah xaafada caanka ah ee uu ku yaalo garoonka (Emirates Staduum) ee kooxda Arsenal, waa’ay ka qaalisantahay xaafadaha kale ee ay Soomaalidu degantahay. Maadaama ay aad ugu dhowdahay bartamaha magaalada London. Xaafadaha kale ee ay Soomaalidu ay ku badanyihiin meheradaha yar-yarka ah sida dukaamada iyo maqaayadaha, badankooda waxaa lagu kireystaa inta u dhexaysa £10,000 ilaa £13,000 sanadkii. Laakiin xaafadda (Finsbury Park) meheradaha ugu boosaska yar-yar oo laamiga saaran kiradooda waxaa ugu yar £25,000 sanadkii.
Xaafadda (Finsbury Park) iyo Dadka Tanadland Nolosha Ay Ku Noolyihiin :-
Run ahaantii markii ugu horeysey ee aan cagodhigay magaalada London, waxaa ii cadaatay in Soomaalida qob-qobka ay degaan ahaan u kala qob-qobantahay uu uga daray. Oo hadii ay isku meel ku wada noolaan lahaayeen ay wax badan kala faa’iideysan lahaayeen. Sababta oo ah markii ugu horeysey ee aan magaalada London tegey waxaan aad ula yaabay nolosha xun ee baaba’a ah ee ay soomaalidu ku nooshahay. Magaalada london mar aan tago waxaa iigu horeysey sanadkii 1989 -kii. Ilamaa iyo waagaas magaalada london wax badan baan cagta mariyey. Arinta aan aadka ula yaabayna waxa weeye Soomaalidu wax ganacsi ah oo muuqda kuma ay laha magaalada London xataa marka hada ah.
Mideeda kale magaalada London waa magaalo caadiyan ay nolosheedu qaxar badantahay oo qaali ah, una daran dadka Soogalootiga ah midab kasta ha lahaadaane. Tusaale ahaan dadka Soomaalida ah ee degan xaafada (Finsbury Park) 80% waa dad reer Tanadland ah. Laakiin marka ay noqoto soomaalida guryaha dowladda hoose ay leedahay ee xaafadda degan cadadka reer Tanadland waa ay ka badanyihiin 90%. Sababta oo ah 15 kii sanadood ee ugu danbeeyey waxaa adkaatay in guryaha raqiiska ah ee dowlada laga helo magaalada london, xaafada (Finsbury Park) na waaba ay ka sii xagjirtaa oo xataa guryaha gaarka loo leeyahay ayaa aad u qaali ah oo aan kiradooda laga bixikarin.
Soomaalida wadamada reer galbeedka ku nool marka ay sabo cusub degahayaan, waxaa jira qaacido aalaa la raaco. Taasoo ah in meesha la rabo inay bulshadu ay soo degto oo ay soo jiidato. In laga dhiso masaajid iyo goobo waxbarasho oo maadi iyo diin isugu jira. Xaafadda (Finsbury Park) waxay leedahay labo masaajid oo ku yaala isku hal wado oo ah wadada (Seven Sisters Road). Masaajidka ku magacaaban xaafadda ee (Finsbury Park Mosque) ee shalay la weeraray waxaa maamula wadaado carab ah. Islington Islamic Mosque iyo machadka (Al-risaalah institute) na waxaa maamula wadaado reer Tanadland ah. http://www.al-risaalah.org
Sidoo kale xaafadda (Finsbury Park) walow ay tahay xaafadda ugu qaalisan xaafadaha ya soomaalidu ka degantahay magaalada London, hadana waxyaalo badan oo waxaa jira ay uga horeyso xaafadaha kale ee ay soomaalidu London ka deganyihiin. Taasoo ay ugu horayso machadyada waxbarasho ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud ahaaneed ee bulshada degaanka ka dhexaysa. Xaafadda (Finsbury Park) waxa ku yaala machadka ugu weyn ee gaarka loo leeyahay oo ay soomaalidu ku leedahay magaalada London. Machad kaas oo uu leeyahay ganacsade reer Tanadland ah oo la yiraahdo (Maxamuud Axmed “Sheelare”). Mideeda kale oo taas ka sii muhiimsan waxa weeye, in dhismeyaasha ganacsiyada reer Tanadland ee ku yaala xaafadda (Finsbury Park) ay intooda badan ay iyagu leeyihiin oo ay iibsadeen. Maadaama ay dhaqan u tahay dadka cadaanka ah ee dhismeyaasha ganacsi ku leh xaafadda (Finsbury Park) inay ku yiraahdaan dadka guryaha ka kiraysta, marka aad doontaan dhismeyaasha ganacsi naga iibsada.
Dadka reer Tanadland xaafadda (Finsbury Park) waxay aad ugu soo bateen 30 kii sanaddood ee ugu danbeeyey. Mudo dheerna xaafadda (Finsbury Park) waxay ahayd xaafad loo yaqaan inay dadka reer Tanadland ay ku badanyihiin. Waxaana dhalinyarada ku soo bar-baaray welina degan xaafadda (Finsbury Park) ugu caansan xoghayaha gudiga olombikada Soomaaliyeed ee GOS (Duraan Axmed Faarax). Oo dhawr sanadood ka hor loo magacaabay in uu xubin joogto ah ka noqdo gudiyada xalinta qilaafaadka ee uruka olombiga aduunka iyo kan qaaradda africa.
ANOCA ayaa Duraan Faarax u wakiilatey inuu xubin ka noqdo gudiga Xiriirka caalamiga ah, Xalinta iyo dhex dhexaadinta qilaafaadka ka dhex dhasha Dowladaha iyo hey’ada Olympica-da NOC, howlaha waxbarashada dhalinta, iyo ka shaqeynta howlaha beni’aadanimada ama gar gaarka.
Sawirka Gudoomiyaha ANOCA (Mr. General Plenfo) oo gudoonsiinaya aqoonsiga xubinnimada joogtada ah (Duraan Axmed Faarax). (Duraan Axmed Faarax) ayaa berigii uu ahaanjirey ardayga iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada xaafadda (Finsbury Park), waxaa lagu xasuustaa in uu aas-aasay ururka isboortiga soomaalida London dagan ugu muhiimsan oo ay ku mideysanyihiin.
Hadaan wax yar ka faaloodo dadkii muslimiinta ahaa ee ku wax yeeloobey weerarkii lagu qaaday shalay masaajidka (Finsbury Park, waxaa ku shihiidey nin british ah oo u asalkiisu ka soo jeedo wadanka Bangaladhesh. Waxaan ku dhaawacmay dad xayn ah oo ay ku jirto haweeney reer Tanadland ah oo la yiraahdo (Xirsiyo) oo ka soo jeeda beesha reer (Xassan Xuseen). Waxaana la ii sheegay dhaawaceedu in uu sahlanyahay oo ay ku koobantahay jug yar oo feeraha ka gaartey. Kedib markii ay dhulka ku dhacday markii dad ay ku jirto gaariga lagu dhuftay.